तपाइँ’को सम्पत्ति’लाई बैंकले कति ऋण दिन्छ ? यसरी गर्नुहोस् स्वमूल्यांकन…
तपाइलाई कुनै पनि बैंकले सम्पत्ति धितो नराखी ऋण पत्याउँदैनन् । यदि तपाइ वा परिवारका सदस्यको नाममा धितो राख्‍ने सम्पत्ति नभए बैंकमा ऋण लिन जानु बेकार हुन्छ ।
बैंकले कुनै पनि प्रकारको घरकर्जामा सम्पत्तिलाई नै धितो सुरक्षणका रूपमा राख्‍ने भएकोले भएकाले त्यस्तो सम्पत्तिको अनुमानित मूल्यांकन थाहा पाउनु राम्रो हुन्छ ।
बैंकले सम्पत्तिको सरकारी मूल्य र बजार मूल्यबीच भेलुएसन गरेर औसत मुल्यांकन निकाली कर्जा प्रवाह गर्ने एनएमबि बैंककी कर्पोरेट रिलेसनसीप म्यानेजर श्रद्धा अमात्यको भनाइ छ ।
त्यही मूल्यका आधार बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले तपाइलाइ ऋण दिने कि नदिने, कति रकम दिनेलगायत कुरा तय गर्छन् । त्यसैले घरजग्गा ऋण लेनदेनमा सम्पत्तिको मूल्यांकन महत्वपूर्ण विषय हो ।
बैंकले नियुक्त गरेका इन्जिनियरले फिल्डमा पुगेर तपाइको धितो राख्‍ने सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्छन् ।
तपाइले बैंकमा ऋणको प्रकृया सुरु गर्नुअघि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर बैंकले कतिसम्म ऋण दिन सक्छन भनेर आफै पनि स्वमूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ । हामी तपाइलाई बैंकले धितो मुल्यांकन कसरी गर्छ भनेर जानकारी गराउँदै छौं जसले तपाइलाई बैंकमा ऋणको प्रकृया सुरु गर्नुअघि बैंकले कतिसम्म ऋण दिन सक्छन भनेर पहिल्यै अनुमान लगाउन सजिलो हुन्छ ।
यसरी गरिन्छ धितो मूल्यांकन
धितो मुल्यांकन गर्ने सबै बैंकका आ–आफ्नो नीति हुन्छन् । नेपाल राष्‍ट्र बैंकले गरेको निर्देशनभित्र रहेर बैंकले आफ्नै नीति बनाएका हुन्छन् ।
बैंकले नियुक्त गरेका इञ्जिनियरले साइटमै पुगेर जग्गाको नापजाँचदेखि चलनचल्तीको बजार भाउ पनि बुझ्‍ने गर्छन । र, सरकारकाले निर्धारण गरेको मूल्य (थैली रकम) र चलनचल्तीको भाउबाट फेयर मार्केट भ्यालु निकाल्छन् ।
हरेक मालपोत कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको बर्षेनी न्यूनतम मूल्यांकन गरेर प्रकाशित गरेका हुन्छन् । तपाइले आफ्नो जग्गाको सरकारी मूल्यांकन कति रहेछ भनेर जान्‍नका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वेभसाइट लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ । आफ्नो जग्गा कुन जिल्लाको कुन मालपोत कार्यालयमा कारोबार हुन्छ, त्यही मालपोत कार्यालय क्लिक गरेपछि तपाइले आफ्नो जग्गाको सरकारी मूल्यांकन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
घरजग्गाको मूल्यांकन गर्दा बैंकले चलनचल्तीको भाउलाई बढी हेर्ने गर्छन् । तपाइले आफ्नो सम्पत्ति भएको ठाउँमा बजार मूल्य कति चलेको छ भनेर आफै बुझ्‍न सक्नुहुन्छ ।
तपाइले सरकारी मूल्यांकन र बजार मूल्य थाहा पाइसक्नुभयो । अब फेयर मार्केट भ्यालु (औसत मूल्यांकन) कसरी निकाल्ने त ? त्यो पनि हामी जानकारी गराउँछौं ।
जहाँ पनि चलनचल्तीको बजार भाउको तुलनामा सरकारी मूल्यांकन निकै कम हुने गर्छ । बजार मूल्य किनबेचको आधारमा तय भएको हुन्छ ।
धेरैजसो बैंकहरुले सकारी मुल्यांकनको ३० प्रतिशत र बजार भाउको ७० प्रतिशतबाट फेयर मार्केट भ्यालु निकाल्ने गरेका छन् । कतिपय बैंकले सरकारी मूल्यांकनको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म र बजार भाउको ६० देखि ९० प्रतिशतलाई आधार बनाएर फेयर मार्केट भ्यालु निकाल्ने गर्छन् ।
र, त्यही फेयर मार्केट भ्यालुको तपाइलाई बढीमा ६० प्रतिशतसम्म घरकर्जा दिने गर्छन् ।
उदाहरणका लागि, मानौं तपाइको सम्पत्तिको बजार मूल्य १ करोड र सरकारी मुल्यांकन ३० लाख रुपैयाँ छ । सो सम्पत्तिको बजार मूल्य १ करोड रुपैयाँको ७० प्रतिशत अर्थात् ७० लाख रुपैयाँ र सरकारी मुल्यांकन ३० लाखको ३० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
अब तपाईंले खरिद गर्न चाहेको घरजग्गाको फेयर मार्केट भ्यालु ७० लाख र ९ लाख गरी ७९ लाख रुपैयाँ हुन आयो । बैंकले फस्ट होम बायर र व्यवस्थित आवास क्षेत्रका घरजग्गाका लागि ६० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्छन् । बाँकीको हकमा ५० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था छ ।
यसको मतलब, तपाइको सम्पत्ति धितो राखेर बैंकले तपाइलाई करीव ४० लाख रुपैयाँ ऋण दिन सक्छन् ।
२०७८ आश्विन ६, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 241 Views